» कसरी चिन्ने सेक्सका अत्यन्तै भोका महिलाहरु ?
कसरी चिन्ने सेक्सका अत्यन्तै भोका महिलाहरु ?
११ जेष्ठ २०७६, शनिबार २१:०८
अक्सर महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । यो मान्यता संसारभरीका महिलामा लागु हुन्छ । प्राय महिलाहरुले थोरै बालेर धेरै भनेका हुन्छन् । सामान्य तरिकाले भन्दा पनि महिलाको शरिरको हाउभाउले धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले आफ्नो यौन चाहान शब्दमा कहिलै ब्यक्त नगर्ने कुरा एक अध्यानले देखाएको छ । यहाँ मलिालाले यौन सम्बन्ध राख्न चाहेको बेला देखाउने ब्यवहार यस्ता छन् । महिला अनपेक्षितरुपमा तपाईको शरीरको सामिप्यतामा आउन खोजिन् वा तपाईलाई छुने बहाना खोजिन् भने बुझ्नुस् उनलाई यौन चाहाना जागेको छ । महिलाहरु खुट्टाको बुढी औंलाले भूइँमा कोतर्न थाले भने पनि उनीहरुको चाहाना बुझ्नु पर्छ । कतिपय स्त्रीहरु च्याटमा त्यस्तै खालका साइन पठाउने वा फोहोर कुरा गर्ने गर्छन् ।
यदि स्त्रीले तपाईको नजिक भएर लामो लामो लामो र गहिरो स्वास लिइरहेको अनुभव गर्नु भो भने उनलाई उत्तेजना भैरहेको छ भन्ने बुझ्नुस् । महिलाहरु उत्तेजित भएपछि गहिरो र लामो श्वास फेर्छन् । उनीहरुको मुटुको ढुकढुकी पनि बढ्छ ।
कतिपय महिलाले नजानिदोगरी पुरुषको संवेदनशील भागहरुमा छुने समेत गर्छन् ।यदि कुनै पनि स्त्रीले तपाईसँग एकान्त होस् भन्ने चाहेको अनुभव गर्नु भो वा धेरै समय तपाईसँग विताउन चाहेको बुझ्नु भो भने उनी के चाहन्छिन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
स्त्रीले शारीरिक सम्बन्ध राख्न चाहेमा उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छन् । अधिकाँश महिलाको अनुहारमा पनि यो चाहाना भएको कुरा रंगको परिवर्तनले झल्किन्छ । अनुहार रातो हुने वा तापक्रम बढ्ने यस्ता समान्य लक्षण हुन्छन् ।
यदि तपाईसँग रहेकी स्त्रीले तपाईलाई अंगाली रहेको समयमा आफ्नै शरीर गह्रौं भएको जस्तो गरी कम्मर वा अन्यत्र हात राख्छिन् भने बुझ्नुस् उनलाई तपाईसँग संसर्ग गर्न मन छ ।
अझ स्त्रीले तपाईको ओच्छ्यानमा बसेर ‘कस्तो नरम ओच्छ्यान’ वा त्यसमा पल्टिने जस्ता ब्यवहार गर्न थालिन् भन्ने कुरा बुझ्नुस् उनी के चाहन्छिन् । यी ब्यबाहारले महिलाको यौन इच्छा छ भन्ने जनाउने गरेको एक अध्यानले बताएको छ ।
तनहुँ – व्यास नगरपालिकामा भाेलि सार्वजनिक बिदा
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बेलुका बस्ने गरी सकियो
गोठालो भत्ताको लागि २ सय ६५ जना भेडा पालक किसानले दिए आवेदन
अमेरिकाले युक्रेनको मामिलामा कुटनीतिक चाल चालेको रुसको आरोप
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सहरुको योगदानको बागमतीका मन्त्री लामाद्वारा प्रशंसा